60-ka kulan ee guddiga ugu fiican ee dadka waaweyn | I sii wakhti firaaqo
Isaac | 17/12/2021 17:48 | La cusbooneysiiyay 20/12/2021 16:09 | General
Tan iyo markii lagu dhawaaqay cudurka faafa ee caalamiga ah, ciyaaraha looxa ee dadka waaweyn Iibkooda ayaa cirka isku shareeray. Sababtu waxay tahay, marka la eego xannibaadaha iyo cabsida dadka qaarkood, maxaa ka wanaagsan oo ka wanaagsan qorshe ka wanaagsan inaad guriga la joogto qoyska ama saaxiibada oo miiska saaran oo aad ku qaadato daqiiqadaha ugu fiican ee qosolka iyo tartanka ciyaarahan xiisaha leh.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira qaar badan oo iyaga ka mid ah oo ay mararka qaarkood adag tahay yaqaan sida loo doorto. Tilmaamahan waxaad si fiican u fahmi kartaa wax kasta oo la xiriira ciyaaraha guddiga ugu fiican dadka waaweyn, noocyada, iyo fursadaha kala duwan ee aad u leedahay inaad ku qaadato wakhtiyada ugu fiican guriga ...
1 Ciyaaraha guddiga dadka waaweyn ee ugu iibinta fiican
1.3 Xisbiga & Co. Extreme 3.0
2 Sidee loo doortaa ciyaarta looxa ugu fiican ee dadka waaweyn?
2.1 Ciyaaraha looxa madadaalada ee dadka waaweyn
2.1.3 Qabiilka Dulmiga
2.1.4 Ciyaarta waa la fasaxay
2.1.5 Ciyaarta guddiga ee u dhaxaysa asxaabta
2.1.6 Waxaad tirtirtaa Waalan
2.1.8 Xasbro Jenga
2.2 Nooca qoyska Trivial
2.2.1 Dabagal Aan Asal Ahaan
2.2.2 Fudud mid ka mid ah u soo daadatay
2.2.4 Ayaa doonaya inuu noqdo milyaneer?
2.2.5 Gudbi ereyga
2.2.7 Ku ciyaar dhaqanka geek
2.3 Si aad ula ciyaarto asxaabta
2.3.1 4-in-1 miiska ciyaaraha badan
2.3.2 Kubadda Cagta
2.3.3 miiska Ping pong
2.3.4 Waqtigu waa dhamaaday!
2.3.5 Xawaaraha kaynta
2.3.6 Waxaan leeyahay laba
2.3.7 Xisbiga EXIN
2.3.8 Ku socota Baqbaqaaqa Haa iyo Maya Maya sir
2.4.1 Qanjirooyinka & Riwaayadaha
2.4.2 Taxanaha Goliath
2.4.3 waxaan ahay moos
2.4.4 Qabiilka Dulmiga Aan wadno dembiga
2.5 Ciyaaraha guddiga laba
2.5.2 4 saf ah
2.5.3 (Un) yaqaaniin?
2.5.4 Kalmo jacayl
2.6 Ciyaaraha guddiga istiraatiijiyadda
2.6.3 Khatarta Hasbro
2.6.4 Istaraatiijiyada Disset
2.6.5 Monopoly Classic
2.7 Ciyaaraha iskaashiga ugu fiican
2.8 Wixii ka weyn
2.8.1 2000 xujo xujo ah
2.8.2 Halxiraalaha markabka 3D
2.8.5 Qoyska UNO
2.8.7 Looxa chess-ka, checkers iyo backgammon
2.8.9 Dusha sare ee kaararka
2.9 Jiilka cusub
2.9.1 Ciyaaraha guddiga khadka tooska ah iyo apps
2.9.2 Ciyaaraha dhabta ah ee la kordhiyay
3.1 Waa maxay ciyaaraha looxa loogu talagalay dadka waaweyn?
3.2 Maxaad u iibsanaysaa madadaalada noocan ah?
3.3 Xagee laga iibsadaa?
Ciyaaraha guddiga dadka waaweyn ee ugu iibinta fiican
Waxaa jira lacag aad u badan, kulan guddiga ugu fiican ee dadka waaweynLabada classic ee la iibiyey jiilba jiil, iyo sidoo kale kuwa ugu casrisan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u ogolaan kartaa naftaada lagu hago liiska Iibinta ugu fiican laga bilaabo xaqiiqda. Iyagu waa iibiyeyaasha ugu sarreeya iyo, haddii ay wax badan iibiyaan ... sababtoo ah waxay haystaan ​​wax gaar ah:
GUATAFAC - Ciyaarta...
Ma waxaad samaynaysaa xaflad ama kulan qoys ama saaxiibo? Ma u baahan tahay qosol dammaanad leh? Markaa ciyaarta loox ee dadka waaweyn waa waxa aad raadineysay. Loogu talagalay dadka ka weyn 16 sano. Waxaad haysataa 8 ilbiriqsi si aad u qiyaasto fikradaha ugu yaabka badan qoyskaaga iyo asxaabtaada. Kaftan madow iyo kaftan wasakh ah oo lagu soo ururiyay 400 oo xaraf oo su'aalo leh iyo 80 xaraf oo gaar ah.
Mid kale oo ka mid ah ciyaaraha guddiga ugu fiican ee dadka waaweyn. Waxay leedahay caqabado nooc kasta ah, dhammaantood waxaa ku raran kaftan wanaagsan si qosolku u soo baxo. Su'aalo aan macquul ahayn oo qosol leh. Ku fiican inaad naftaada hadiyad siiso ama aad siiso kuwa aad jeceshahay. Dabcan, waxaa loogu talagalay dadka ka weyn 18 sano ...
Xisbiga & Co. Extreme 3.0
Disset - Party & Co...
In ay ka mid tahay iibiyeyaasha ugu fiican maaha wax la yaab leh. Waxaad u ciyaari kartaa kooxo, 12 imtixaan oo kala duwan iyo 4 qaybood. Iyada oo la adeegsanayo imtixaannada sawir-qaadista, su'aalaha, jilidda, jilidda, iwm. Mid ka mid ah kuwan oo dhan mid aan waligii ku caajisin si kasta oo aad u ciyaarto, taasina waxay ka dhigi doontaa qof walba inuu waqti fiican ku ciyaaro.
Iibso Party & Co.
COCORROT - Ciyaarta...
Ciyaar turubka dhiirranaanta leh oo leh in ka badan 600 oo kaarar si aad u haysato ilaa 234 saacadood oo qosol ah oo dammaanad ah. Ciyaar loogu talagalay dadka waaweyn oo ay ku jiraan xaalado kacsi, dhiirranaan, kaftan madow, iyo 0% anshaxa ayaa isku dhafan. Wax kastaa waa lagu qoslaa iyada oo aan la joojin. Taas awgeed, ciyaaryahan kastaa wuxuu haystaa 11 kaadh oo cadcad (jawaab), ciyaaryahan bakhtiyaa nasiib ah ayaa akhriya kaarka buluuga ah oo bannaan. Habkan, ciyaaryahan kastaa wuxuu dooranayaa kaarka ugu qosolka badan ee ay haystaan ​​si uu u dhamaystiro jumlada.
Sidee loo doortaa ciyaarta looxa ugu fiican ee dadka waaweyn?
Waqtiga dooro ciyaarta looxa ugu fiican ee dadka waaweyn Shaki ayaa soo bixi kara, qof walbana ma jecla mawduucyo isku mid ah iyo qaababka ciyaarta. Waxaa jira iyaga oo loogu talagalay kooxo kala duwan, laga bilaabo qaar gaar ah ilaa xubnaha qoyska, kuwa kale oo ku habboon kooxaha asxaabta sababtoo ah nuxurka ama mawduuca, iyo xitaa qaar gaar ah marka la eego nooca ciyaarta ee su'aasha. Sidaa darteed, waa inaad ogaataa qaybaha kala duwan ee aadka loo dalbado:
Ciyaaraha looxa madadaalada ee dadka waaweyn
Waxaa jira qaar ka mid ah ciyaaraha looxa oo loogu talagalay dadka waaweyn kuwaas oo si gaar ah ugu taagan qosolka ay dhaliyaan, kuwa qosolka leh oo qof kasta uu ku dhamaan doono qosol nadiif ah. Kuwa ku majaajilooda xaaladaha qosolka leh, ama kaa dhigaya inaad soo saarto ruuxaaga majaajilada ah. Kuwa kaa dhigaya inaad la qaadato fiidkii aan la ilaawi karin kuwa aad jeceshahay oo had iyo jeer ku sii jiri doona xusuusta. Kan ugu qosolka badan dhamaantood waa:
Glop Mimika - Ciyaarta...
Markaad la kulanto, waxay noqon doontaa mid ka mid ah ciyaaraha guddiga dadka waaweyn ee isku midka ah ee ka mid noqon doona kuwa aad ugu cadcad. Loogu talagalay qoyska ama saaxiibada, oo leh qosol buuxa oo dammaanad qaadaya iyo taabasho xeelado, heerar kala duwan, qaybo, iyo ujeeddada helitaanka mid ka mid ah nooc kasta oo kaar ah si uu u guuleysto.
Glop Pinta - Ciyaaraha...
Waxay noqon kartaa beddel wanaagsan oo kii hore, ama dhammaystir dhammaystiran, maadaama ay sidoo kale loogu talagalay wakhtiyadaas qoyska ama asxaabta markaad u baahan tahay madadaalo iyo madadaalo. Laakiin, si ka duwan kii hore, waxay ku saabsan tahay rinjiyeynta iyo qiyaasida.
Soo iibso Pint
QABIILKA SINVERGUENZAS -...
Ciyaar qosol badan oo lagu sameeyay Spain, oo ku salaysan kaarar oo ku habboon in saaxiibada lala qoslo. Taabasho hooligan ah, waxaad u baahan doontaa inaad ku dacweyso oo ay ku eedayn doonaan, waxaa kuu dheer inaad isu dhiibto imtixaanno aan macquul ahayn iyo ka qaybqaadashada caqabado bulsheed oo aadan weligaa malayn. Ciyaar aad ku garanayso sida aad wax u bilowdo, laakiin aanad garanayn sidaad u dhammaysato...
Iibso Qabiilka Dulmiga
Ciyaarta waa la fasaxay
Ciyaarta Off - Guutada...
Ciyaar xiiso leh oo da' kasta leh iyo 120 duels u gaar ah si ay weji ka waji u muujiyaan una muujiyaan kartidaada maskaxeed, jireed, geesinimo, xirfad, ama nasiibkaaga. Waa kuwo aad u dheereeya oo aad loo madadalo karo, taas oo ciyaartoyda inteeda kale ay u dhaqmi doonaan sidii garsoorayaal si ay u go'aamiyaan cidda guulaysatay.
Ciyaarta guddiga ee u dhaxaysa asxaabta
😈 sxb🤣 -Ciyaarta...
U fiican kulamada asxaabta, xafladaha bachelorette ama bachelorette, iwm. Qosol iyo raynrayn wacan ayaa mahad iska leh su'aalaha go'aanka ah ee lagugu soo gudbin doono. Waxaad ku waayi doontaa dhammaan ceebaha caqabadaha iyo su'aalaha u dhexeeya kaararka ...
Iibso ciyaarta Board-ka ee u dhexeeya asxaabta
Waxaad tirtirtaa Waalan
Beddel wanaagsan oo Xisbiga ah, oo loogu talagalay dhammaan qoyska iyo asxaabta, laga bilaabo 8 jir. Ciyaar aad u xiiso badan oo kulmisa imtixaano nooc kasta ah, sida dhegaysi, sawir-qaadis, is-yeel-yeel, eedaymo qosol leh, iyo waalli kama-dambays ah. Qofka ugu horreeya ee hela dhammaan 5 loci wuxuu ku guuleysan doonaa taajka Boqorka nacasyada ...
Soo iibso waalan
Uma baahna hordhac, waa wax caadi ah. Qof kasta, iyada oo ujeedadu tahay in la bixiyo tilmaamo iyada oo aan la isticmaalin erayada la mamnuucay. Iyada oo la cusbooneysiiyay nuxurka iyo ilaa 1000 kelmadood iyo 5 siyaabood oo kala duwan oo loo ciyaaro. Haddii wiilka Altar iyo Xavier Deltell ay waqti adag ku yeesheen kursiga casiraad ee barnaamijka 'Me slips', hadda waad u naxariisan kartaa iyaga ...
Mega Hi-Tower boorso ku dhex jirta -...
Mid kale oo ka mid ah classics, fudud, fududahay in la ciyaaro, dhammaan daawadayaasha, iyo madadaalo. Waa daar laga dhisay alwaaxyo, waa in aad marba mar isku daydaa inaadan dumin. Ma aha oo kaliya inaad ka saarto qaybtaada, laakiin inaad isku daydo inaad ka dhigto qaabdhismeedka mid aan degganayn intii suurtagal ah si qofka ka soo horjeeda isaga taabto marka xigta uu u sii adkeeyo.
Iibso Jenga Iibso Giant Jenga
Nooca qoyska Trivial
Hadaad jeceshahay ciyaaraha looxa ee nooca qoyska Trivial, oo leh su'aalo iyo halka lagu muujinayo hadiyadaha caqliga iyo dhaqanka waa aasaas, markaa waa inaad fiirisaa xulashadan kale. Halkan waxa aad ku arki doontaan maqaallo ujeeddadoodu tahay in la abaal-mariyo qofka ugu aqoonta badan:
Dabagal Aan Asal Ahaan
Hasbro Gaming Wax yar
Dabcan, ciyaaraha kediska dhexdooda, Trivial lafteedu ma maqnaan karto. Ciyaar dhaqameed guud oo aan caadi ahayn oo leh qaybo kala duwan oo aad isku dayi doonto inaad si habboon uga jawaabto dhammaan su'aalaha oo aad hesho dhammaan xaleefyada farmaajo ka hor qof kasta oo kale.
Iibso Daba-gal aan yarayn
Fudud mid ka mid ah u soo daadatay
Kow iyo Toban Xoog LQSA Wax yar...
Haddii aad taageere u tahay La que se avecina, markaa nasiib baad leedahay, maadaama ay jiraan ciyaaraha guddiga sida Trivial oo leh mowduucyo badan (Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, Lord of the Rings, The Big Bang Theory) ...), oo ay ku jiraan sidoo kale taxanaha Isbaanishka LQSA. Ma kula tahay inaad si fiican u garanayso jilayaashiisa iyo dhammaan siraha taxanaha ah? Is tijaabi…
Iibso wax yar LQSA
Goliath - dharbaaxo, ciyaarta ...
Ciyaar kale oo aan macno lahayn oo loogu talagalay qoyska oo dhan, laga bilaabo 8 jir. Loox, 50 kaadh oo ay ku jiraan 500 su'aalood, iyo xigmaddaada inaad si sax ah uga jawaabto oo aad dhibco ku dhaliso. Dhaqdhaqaaqu waa sidaas, laakiin ka digtoonow... su'aalaha waxaa ka buuxa dabinno, mararka qaarkoodna caqligu wuu ka fiican yahay xawaaraha.
Soo iibso dharbaaxo
Ayaa doonaya inuu noqdo milyaneer?
Dadka da'doodu tahay 12 sano way ciyaari karaan, iyo 2 ciyaartoy ama ka badan. Ciyaarta looxa ee loogu talagalay dadka waaweyn waxay ku salaysan tahay kediska caanka ah ee telefishinka ee leh magac isku mid ah. Waa inaad ka jawaabto su'aalaha, waxaadna yeelan doontaa taxane kaftan ah marka doorashadu noqoto mid adag. Jawaabo kala duwan ayaa lagu siinayaa, waana inaad doorataa mid sax ah, adigoo kordhinaya heerka dhibka mar kasta.
Iibso Yaa doonaya inuu noqdo milyaneer?
Ciyaarta guddiga ee qoyska oo dhan iyadoo lagu salaynayo kediska telefishinka. Waa inaad ku tijaabisaa aqoontaada 6 imtixaan oo kala duwan, oo leh in ka badan 10.000 su'aalood iyo rosco-ga ugu dambeeya si aad isku daydo inaad qiyaasto ereyo badan ka hor inta uusan wakhtigu dhammaan.
Mid ka mid ah ciyaaraha ugu qosolka badan ee halkaas ka jira, iyo kan ugu fudud, laakiin mid gelin doona male-awaalkaaga, hal-abuurkaaga iyo erayadaada tijaabada. Scattergories-ka waxaad ka ciyaari kartaa 2 ilaa 6 ciyaartoy, laga bilaabo 13 sano jir, kuwaas oo aad ka heli doonto ereyo ka tirsan qayb oo ka bilaabma xaraf gaar ah.
Iibso meelo kala firdhiso
Ku ciyaar dhaqanka geek
Ku ciyaar dhaqanka geek...
Cinwaan loogu talagalay da' kasta iyo taageerayaasha adduunka ee tignoolajiyada, internetka, ciyaaraha fiidyaha, khayaalka sayniska iyo geesiyaasha sare. Taasi waa, loogu talagalay geeks. Markaa waxaad tijaabin kartaa aqoontaada ama tan asxaabtaada mowduucyadan oo dhan.
Si aad ula ciyaarto asxaabta
U ciyaarista qoys ahaan lama mid aha samaynta asxaabta, halkaas oo jawigu ka yara duwan yahay. Aad bay u xiiseeyaan, oo ay ka kooban yihiin waxyaabo ay ka mid yihiin in ay ku tusiyaan sida aad caadi ahaan ula tusi lahayd saaxiibbada, ama aan ku habboonayn qoyska oo dhan. Waqtiyadaas asxaabtaada ugu fiican, cinwaannada ugu fiican ee aad ka heli karto waa:
4-in-1 miiska ciyaaraha badan
Leomark Multigame miiska...
Miiskan ciyaaraha badan ayaa ku fiican in lala ciyaaro asxaabta. Waxay ku leedahay 4 ciyaarood hal miis, sida biilliards, foosball, ping pong, iyo xeegada. Qalabka tayada leh sida alwaax, qaab-dhismeed adag, cabbirrada 120 × 61 cm board iyo 82 cm sare. Si deg deg ah oo fudud ayaa loo soo ururiyey waxayna haysataa shahaadooyin tayada iyo badbaadada Yurub.
Kubad miis tayo leh, oo alwaax MDF ah oo dhumucdiisu tahay 15 mm. Cabbiradu waa 121x101x79 cm. Lugaha deggan oo dhererka lagu hagaajin karo. Waxaa ku jira faahfaahinta sida miiska goolka, leh biraha birta ah iyo caag aan sibiq lahayn, sawiro rinji ah, iyo 2 koob. Laba kubbadood iyo tilmaamaha kor u qaadista ayaa lagu daray.
Soo iibso Foosball
miiska Ping pong
Dione S500o - Shaxda ...
Isku laabashada miiska ping pong si aysan u qaadin meel bannaan, oo ku habboon gudaha iyo dibaddaba, maadaama ay ka hortagto walxaha. Iyada oo loox adag oo leh dusha sare ee 274 × 152.5 × 76 cm. Waxaa ka mid ah 8 taayir si ay u awoodaan in ay u rogaan ama u dhaqaajiyaan si fudud, iyo sidoo kale bareega si looga hortago in uu socdo inta ay socoto ciyaarta. Kubadaha ciyaarta laguma darin, laakiin si gooni ah ayaad u iibsan kartaa:
Iibso miiska ping pong
Soo iibso majarafad iyo kubbado
Waqtigu waa dhamaaday!
Ciyaar ku habboon asxaabta taas oo aad ku qiyaasi doonto dabeecad. Waxay noqon karaan dad caan ah oo dhab ah ama mala-awaal ah, dhammaantoodna waxay ku mahadsan yihiin sharraxaadaha lagu bixiyo dabeecad kasta iyada oo aan la magacaabin. In wareegga koowaad, wareegga xiga uu heerku kor u kaco oo ay tahay inay ku dhuftaan hal kelmad. Wareega saddexaad, kaliya shaydaanku waa sax.
Iibso Waqtigu waa dhamaaday!
Zygomatic - Xawaaraha Jungle
Ciyaar turubka ah oo leh minigames kala duwan. Ku habboon da'da 7 iyo wixii ka weyn. Waa inaad heshaa kaadhadhka summadaada oo kale oo aad qabato totemka. In ka badan 50 calaamadood iyo 55 kaarar oo kala duwan. Xawaaraha, fiirsashada iyo falcelinta ayaa fure noqon doona.
Iibso Xawaaraha Jungle
Waxaan leeyahay laba
TENGO DUO - Ka cusub ...
Ciyaar looxa oo madadaalo leh oo aad turubka ku ciyaarto oo ay tahay inaad iska kaashato. Filo, u naxariisashada asxaabtaada, iyo xawaaraha ayaa kuu horseedi doona guul. Ciyaaryahan kastaa waa inuu isku dayo inuu qiyaaso jawaabaha ay bixiyaan ciyaartoyda kale halka kuwa kale ay isku dayaan inay qiyaasaan tooda.
Iibso waxaan haystaa Duo
EXIN Fiesta - Ciyaarta ...
Waa sanduuq leh 3 in 1. Waxaad ka heli doontaa ciyaarta dilaaga ah, taas oo ciyaartoyda aan waxba galabsan ay tahay inay ogaadaan cidda uu yahay gacankudhiiglaha qarsoon, ciyaar koox kale, halkaas oo aad ku qiyaasi karto erayada ugu badan ee suurtogalka ah adoo raacaya xeerarka wareeg kasta (sharaxaad) , shaydaan, sawir, dhawaaq), iyo ciyaarta xawaaraha, kaas oo isku dayaya inuu ka jawaabo kaadhadhka ugu badan ee suurtogalka ah 1 daqiiqo gudahood kooxdaada.
Iibso EXIN Fiesta
Ku socota Baqbaqaaqa Haa iyo Maya Maya sir
Ciyaaraha Al Loro - Ni Si Ni...
Ciyaar miiska loogu talagalay dadka waaweyn oo ku habboon xisbiyada saaxiibada. Waxay ka kooban tahay ka jawaabista 10 su'aalood oo diyaarsan oo basbaas leh adigoon odhan Haa ama Maya. 2 qof ama inta aad rabto way ciyaari kartaa. Qaab aad sidoo kale ula sheekeysato dadka kale ee aad hadda la kulantay ama meelaha bannaan ee cabitaannada.
Iibso Haa iyo Maya midkoodna
Waxa kale oo jira qaar ciyaaraha looxa ee dhalinyarada, oo leh hawo cusub oo casri ah oo ku jihaysan jiilalka cusub. Alaabooyin leh jargon dhalinyaro ah, oo leh mawduucyo u gaar ah kooxdan da'da ah, ama taas macnaheedu yahay aqoonta tignoolajiyada cusub, isbeddellada, iwm. Tusaalooyinka kuwan qaarkood waa:
Qanjirooyinka & Riwaayadaha
Sanduuqa Dungeons & Dragons...
Waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan. Dragons iyo godadku waxay noqdeen caan gaar ahaan ka dib taxanaha Big Bang Theory, tan iyo markii ay jilayaasheeda ciyaari jireen. Mid ka mid ah ciyaaraha guddiga ugu fiican haddii aad jeceshahay mala-awaal iyo khiyaali. Ciyaar sheeko-sheeko ah oo ay tahay in ciyaartoydu isku dhex miidaan dhammaan noocyada tacaburrada xiisaha leh, laga bilaabo sahaminta mazesyada, bililiqada hantida, la dagaallanka daanyeerka halyeeyada ah, iwm.
Iibso sanduuqa bilowga ee D&D
Iibso Qalabka Aasaasiga ah ee D&D
Ciyaar isku darka qaar ka mid ah ciyaaraha kale mid ka mid ah. Waa nooc istiraatijiyad ah, waana inaad barataa sida aad u xannibi lahayd kuwa kaa soo horjeeda oo aad ka saartaa qaybo ka mid ah guddiga ka hor intaanay kula samayn. Waxaad u ciyaari kartaa si gaar ah ama xulufo. Waxaad arki doontaa in ay u egtahay saddex xariiq, inkastoo tani ay tahay inaad ku dhejiso 5 chips oo isku midab ah oo siman, toosan ama gees ah, laakiin waxay kuxirantahay kaararka kugu taabtay gacantaada, sida haddii ay tahay turub.
Iibso isku xigxiga
waxaan ahay moos
Magac madadaalo, firfircooni iyo dhalinyaro ah oo aad ku noqon doonto bukaan ku jira xarunta dhimirka ee aaminsan shay ama xayawaan, oo leh 90-ilbiriqsi cayaarood oo aan ciyaartoydu ku hadli karin, laakiin dhaqdhaqaaqyo ay tahay inay dadka kale ogaadaan waxa ay tahay. Waxay ciyaari karaan 2 ama ka badan, waxayna ku habboon tahay in ka badan 8 sano. Laakiin ka digtoonow, mar haddii "dhakhtarku" ha u oggolaan dhakhtarku inuu arko waxaad tahay, maadaama uu yahay kan keliya ee kooxda oo aan ahayn "chota".
Iibso waxaan ahay moos
Qabiilka Dulmiga Aan wadno dembiga
Magac kale oo ka mid ah taxanahan ciyaaraha guddiga Isbaanishka. Mid ka mid ah ciyaarahaas oo ah hooligans iyo qosol la hubo. Soo ururi asxaabtaada, isku shaandheyn kaararka, oo ku bilow kan ugu horreeya. Waxaa jira 4 nooc oo kaarar cusub ah, eedayn, loolan bulsho, WTF! Su'aalo iyo kaarar madhan si aad ula timaado waxaad rabto.
Iibso Aynu wadno dembiyada
Ciyaaraha guddiga laba
ka ciyaaraha looxa laba Waxay yihiin classic ah, oo waxaa jira qaar badan oo iyaga ka mid ah. Si aad u ciyaarto sida lamaane dhab ah, ama nooc kasta oo kale oo lamaane ah. Ku fiican marka dad badani aanay soo ururin karin, suurtogalna ma aha in la isticmaalo guddiyo kale oo badanaa u baahan kooxo ama kooxo waaweyn. Ciyaaraha looxa ugu fiican ee dadka waaweyn ee noocaan ah waa:
Lahaanshaha miiska barkada ee guri aan lahayn meel aad u badan mar walba suurtagal maaha, laakiin miiskan cuntada oo u beddelaya barkad, waa. Waxqabadka iyo madadaalada ayaa isugu yimaada miiskan la beddeli karo oo cabbiraya 206.5 × 116.5 × 80 cm oo dherer, ballac iyo dherer ah. Waxa ku jira dhammaan agabka lagu ciyaaro waxaana lagu dooran karaa cajalad midabyo kala duwan leh.
Iibso miiska barkada
4 saf ah
Falomir - Goobta 4 Ciyaarta
Chips laba midab, laba ka qaybgalayaasha. Fikradda ayaa ah in iyaga la galiyo guddiga si aad isugu daydo in aad abuurto safaf 4 ah oo ku jira xariiq midabkaaga ah. Qofka kaa soo horjeeda waa inuu sidaas oo kale sameeyaa, isagoo ku xannibaya si aadan horay u helin.
Iibso 4 Online
(Un) yaqaaniin? –...
Ma aha oo kaliya ciyaarta looxa 2 qaangaar ah, laakiin waxay gaar u tahay lamaanayaasha. Waxa aad ku tijaabin kartaa waxa aad ka taqaano lamaanahaaga, adiga oo waydiinaya su'aalo ku saabsan nolol maalmeedka, shakhsiyadda, xidhiidhka, dhadhanka shakhsi ahaaneed, iwm. Dooro warqad su'aal wadata, u codee jawaabta adiga kugu habboon, oo qofka kale ha ka jawaabo si uu u eego inay ku habboon tahay ...
Iibso (Un) yaqaan?
JACAYLKA EREYADA -...
Ciyaar kale oo looxa loogu talagalay lammaanaha. Iyada, waxaad ku xoojin kartaa xiriirka waxayna kaa caawin kartaa inaad si fiican u barato lammaanaha, xitaa sirta ugu dhow. Way fududahay in la ciyaaro, waxaa jira 100 kaar oo su'aalo ah oo loogu talagalay inay horseedaan wadahadal ku saabsan waagii hore, mustaqbalka, dareenka, lacagta, rabitaanka, jacaylka, iwm.
Kalmada ku iibso jacaylka
Waa ciyaar dhib badan, in la barto oo lagu raaxaysto. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad u ciyaarto si aad u noqoto kan ugu dhaqsaha badan uguna xariifsan si aad u ogaatid tilmaamaha qarsoon iyo kuwa dahsoon oo aad gasho kabaha basaaska sirta ah si aad u ogaato qarsoodiga oo sidaas ku guuleysto ciyaarta ka hor inta uusan qofka kaa soo horjeeda sameynin.
Ciyaar badeed oo aad la ciyaareyso isku-duwayaasha si aad isugu daydo in aad quusiso maraakiibta kaa soo horjeeda. Waxay ku sugnaan doonaan jagooyinkii uu doortay, mana arki kartid, kaagana ma arki karo. Waxaa lagu ciyaaraa indho la'aan, oo isku dayaya in la helo meesha ay joogaan si loo baabi'iyo. Shaki la'aan mid kale oo ka mid ah classics ee laba ...
Iibso Doonyaha Quraacda
Ciyaarta ARTAGIA madadaalo iyo...
Ciyaar gaar ah oo madadaalo leh oo loogu talagalay lammaanaha taas oo aad ku hagaajin karto kalsoonida, ku dhiirato sheeko qosol leh, shukaansi, iwm. Dooro kaar, ka jawaab su'aasha, ama samee tartan jacayl oo la soo jeediyay. Ma ku dhiiratay?
Taageerayaasha istaraatiijiyadda ee raba inay tuuraan Warcraft, Age of Empires, Imperium, iwm, oo u beddelaan ciyaaraha miiska sare waxay ku farxi doonaan cinwaanno ay ka mid yihiin:
Devir - Catan, ciyaarta ...
Waa ciyaar istiraatijiyad abaal-marineed, oo ay in ka badan 2 milyan oo ciyaartoy hore u joogaan. Waxay u baahan tahay fiiro gaar ah iyo inaad noqoto istiraatijiyad wanaagsan si aad u guulaysato. Lagu taliyay da'da 10 iyo ka weyn iyo 3 ama 4 ciyaartoy. Dhexdeeda waxaad noqon doontaa mid ka mid ah degeyaashii ugu horreeyay ee jasiiradda Catan, magaalooyinka ugu horreeya iyo kaabayaasha ayaa bilaabi doona inay muuqdaan. Wax yar ayaad horumarsan doontaa, magaalooyinkii oo isu beddelaya magaalooyin, waxaa la hagaajiyay gaadiidka iyo ganacsiga, hababka looga faa’iidaysto kheyraadka iwm.
Mid ka mid ah ciyaaraha istaraatiijiyadda ugu fiican iyo mid ka mid ah kuwa ugu horumarsan. Waxa ku jira loox leh ballaadhino suurtagal ah si loogu daro fursado iyo nuxur badan. Waxay ku habboon tahay 2 ilaa 5 ciyaartoy, waxayna ku habboon tahay da'da 7 iyo wixii ka weyn. In ka badan 10 milyan oo ciyaartoy ayaa lagu xidhay ciyaartan taas oo ay tahay inaad ku balaadhiso dhulkaaga, aad la dagaalanto, oo aad hanti cusub ku qabsato.
Soo iibso Bakhtiga
Mid kale oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee istiraatiijiyadda ay ku guuleysato gumeysiga Boqortooyadaada. Iyada oo leh 300 oo tirooyinka, kaararka howlgalka, oo leh 12 howlgal oo sir ah, iyo guddi aad ku dejiso ciidamadaaga oo aad kula dagaallanto dagaallo cajiib ah. Ciyaar ay ka buuxaan xulufo, weerar lama filaan ah, iyo khiyaamo.
Da'da 8 iyo ka weyn iyo 2 ciyaaryahan, Stratego waa mid kale oo ka mid ah ciyaaraha guddiga ugu fiican ee dadka waaweyn. Guddi heersare ah oo aad weerari karto oo aad iska difaaci karto naftaada si aad isugu daydo inaad ka adkaato calanka cadowga, taas oo ah, nooc ka mid ah CTF. Iyada oo 40 qaybood oo loogu talagalay ciidanka darajooyinka kala duwan kuwaas oo awood u yeelan doona inay tijaabiyaan fikirkaaga macquul ah iyo istaraatiijiyadeed.
Monopoly - Classic, Old...
Waxaa jira dhowr nooc oo Monopoly ah, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan ayaa weli ah kan caadiga ah. Inkasta oo aanay ahayn ciyaar istiraatijiyad ah oo la isticmaalo, waxay u baahan tahay xoogaa xikmad ah oo ay taqaanno sida loo maareeyo si loo ogaado sida wax loo iibsado iyo si loo helo boqortooyadii hantida.
Ciyaaraha iskaashiga ugu fiican
Sida for ciyaaraha guddiga iskaashigaSi aad ula ciyaarto xulafada, koobabyada ugu fiican ee aad iibsan karto waa kuwan:
Ciyaar loox oo loogu talagalay dhammaan da'da laga bilaabo 8 sano jir. Waa ciyaar wadashaqeyn ah oo ay tahay inaad isku daydo inaad xalliso wax qarsoon, dhammaan ciyaartoyda ayaa wada guuleysan doona ama guul darreyn doona. Hadafku waa in la ogaado waxa ka dambeeya dhimashada ruuxa daarta la rafaadiyay oo uu naftiisa ku nasto nabad. Hal ciyaaryahan ayaa qaata doorka rooxaanta, ciyaartoyda inteeda kale waxay la ciyaaraan dhexdhexaadiyeyaasha kuwaas oo heli doona tilmaamo taxane ah oo tilmaamaya sirta ...
Ciyaartan waxay ku qaadanaysaa February 24, 1895, London. Bam ayaa ku qarxay baarlamaanka Sherlock Holmes, oo uu weheliyo kaaliyihiisa, ayaa ka qayb qaadan doona si ay u ogaadaan xaqiiqada kiiskan.
Ciyaar iskaashi qoys oo abaal-marin lagu helay. Halkaas waxaad ku dhex milmi kartaa maqaarka tacaburiyeyaasha kuwaas oo ay tahay inay soo ceshadaan khasnadaha jasiiradda dahsoon. Waxaa la ciyaari karaa laga bilaabo da'da 10. Isku dar kaararka iyo tirooyinka guddiga si aad isugu daydo inaad ka fogaato khataraha oo aad u hesho hanti.
Ciyaartan iskaashiga ahi waxay ku habboon tahay 2 ilaa 4 ciyaartoy, da'doodu tahay 14 jir ama ka weyn, taas oo ay tahay inaad isku daydo inaad bani'aadamka ka badbaadiso masiibo. Cudurada iyo cayayaannada faafay waxay dilaan dad badan, waana inaad ogaataa daawada. Si tan loo sameeyo, waxay u safri doonaan adduunka oo dhan iyagoo raadinaya agabyada lagama maarmaanka ah si ay u soo saaraan daawada ...
Wixii ka weyn
Sidoo kale waayeellada Waxay heli karaan waqti cajiib ah oo ay ku ciyaaraan tiro badan oo ciyaaraha guddiga ah, da'da "Senior" oo badan. Qaar ka mid ah waa horeba classic, iyo in ay sii wadaan in ay kiciyaan xiisaha kooxdan da'da ah, kuwa kale waa xoogaa cusub, ugu yaraan in dalkeena, tan iyo markii ay laga keeno meelo kale oo meeraha ah. Magacyada la tixgelinayo ee aan la waayi karin waa:
2000 xujo xujo ah
Educa - Calaamadaha ...
Halxiraale loogu talagalay dadka waaweyn, oo leh 2000 oo xabbo, oo leh sawir qurux badan oo calaamadaha Yurub ah. Halxiraalaha, mar la isu keeno, wuxuu leeyahay cabbirro 96 × 68 cm. Chips-yadu waa kuwo tayo sare leh oo ku habboon si fiican, marka lagu daro inay ka samaysan yihiin walxo deegaanka u wanaagsan. Ku habboon in lala ciyaaro carruurta 12 jir ah, dadka waaweyn iyo kuwa ka weyn.
U soo iibso halxiraalaha dadka waaweyn
Halxiraalaha markabka 3D
Halxiraalaha 3D fantastic si loo abuuro markab burcad badeed qurux badan. Waxa laga sameeyay xumbo EPS adkaysi u leh, oo leh 340 xabbo si loo dhiso nuqul ka mid ah aargoosiga Queen Anne ee cabbirka, oo leh cabbir 68x25x64 cm. Marka la isku keeno, waxay leedahay nalka LED ah oo leh 15 nalal oo ay ku shaqeeyaan 2 baytari AA ah. Ku habboon da'da 14 iyo ka weyn.
Iibso halxiraalaha 3D
A classic ka mid ah classics iyo qoyska oo dhan, in kasta oo gaar ahaan kuwa ka weyn maanka ku hayo. Waxaa ku jira durbaan bas oo toos ah, kubbado leh nambarada, iyo xirmada kaararka lagu ciyaaro. Ku alla kii hela khadka iyo bingo marka hore, wuu guulaysan.
Kaararka ay ku jiraan tirooyin la isku daray oo ay tahay in aad isku qasto, u qaybiso ka qaybgalayaasha, oo si tartiib tartiib ah isu waafajiyaan tirooyinka. Midka ugu horreeya oo dhan jibkiisa ayaa guulaysan doona.
Ciyaaraha Mattel UNO Asalka...
Ciyaar turubka la yaqaan oo aad u dhaqameed taas oo u ogolaanaysa 2 ciyaartoy inay si gaar ah u ciyaaraan ama koox ahaan. Ujeedadu waa in aad noqoto qofka ugu horreeya ee kaadhadhku ka dhammaado. Oo markaad hal kaar oo keliya kuu hadhay, ha ilaawin inaad ku qayliso UNO!
Lewppox Tic Tac - Ciyaarta...
Ciyaarta tic-tac-suul ee caadiga ah, in la isku dayo in la dhigo 3 qaab oo siman oo xariiq ah, mid toosan, toosan ama gees ahaan ah. Iskuna day inaad hor istaagto qofka kaa soo horjeeda si uusan horay u helin.
Iibso 3 isku xigta
Looxa chess-ka, checkers iyo backgammon
Guddi 3-in-1 ah oo lagu ciyaaro saddexdan ciyaarood ee caadiga ah ee aan u baahnayn hordhac. Inkasta oo ay ku habboon tahay dadka waayeelka ah, waa ciyaar aan da' lahayn, sidaas darteed carruurtu sidoo kale way ciyaari karaan.
Fournier Parchis iyo Goose
Ciyaarta OCA iyo Parcheesi waa kuwa kale ee ciyaaraha ugu caansan wakhti kasta. Boodhkan dib loo rogi karo waxaad ku yeelan kartaa labada ciyaarood ee madadaalada qoyska.
Dusha sare ee kaararka
Fournier F20991 - Dusha sare ...
Fournier- Nº 505 Dusha sare ...
Dabcan, ka mid ah classics ma aad ka maqnaan kartaa kulan miiska kaararka. Iyada oo leh sagxada Isbaanishka ama sagxada Faransiiska, sida aad doorbideyso. Waxaad awoodi doontaa inaad ciyaarto noocyo kala duwan oo ciyaaro ah, maadaama isla sagxad isku mid ah ay jiraan kuwo badan (Uno, Pócker, Chinchón, Cinquillo, Mus, Solitaire, Blackjack, 7 iyo badh, Briscola, Burro,…).
Iibso sagxada Isbaanishka Iibso sagxada turubka
Dabcan, qaybtan kale ma maqnaan karto, taas oo dhawaan soo baxday iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta tignoolajiyada cusub. Oo waa in xisaabinta, internetka, iyo xaqiiqada dhabta ah, xaqiiqada la kordhiyay ama farsamada dhabta ah ee isku dhafan ay sidoo kale beddeleen habka loo ciyaaro ciyaaraha looxa. A jiilka cusub ee ciyaaraha guddiga dadka waaweyn ayaa yimid, waana inaad ogaataa mashaariicdan xiisaha leh:
Ciyaaraha guddiga khadka tooska ah iyo apps
Waxaa jira dhowr kulan oo internetka ah oo aad kula ciyaarto qoyskaaga ama asxaabtaada meel fog, iyo sidoo kale qaar ka mid ah apps mobile kuwaas oo sidoo kale kuu ogolaanaya inaad ku ciyaarto classics qaabka multiplayer ama ka dhanka ah mishiinka. Waxaad ka raadin kartaa Google Play iyo App Store dukaamada app.
Qaar ka mid ah boggaga internetka oo leh casiirka miiska bilaashka ah Waxay yihiin:
Ciyaaraha dhabta ah ee la kordhiyay
Ma qiyaasi kartaa ciyaarta looxa oo aad ku soo celin karto ciyaaro badan oo kala duwan, oo aad ku arki karto dhismayaal iyo walxyo saddex dhinac ah, iyo meelaha ay taayiradadu ahayn tiillo, laakiin u soo noolaada oo noqdaan geesiyaal, xayawaan, xayawaan, iwm. . Hagaag, jooji male-awaalka, taasi waa horeba halkan iyada oo ay ugu wacan tahay muraayadaha dhabta ah ee la kordhiyay iyo waxa loo yaqaan Tilt Five.
Algunas de las shaki badan iyo su'aalaha sida caadiga ah lagu weydiiyo agagaarka ciyaaraha guddiga ee dadka waaweyn waa kuwan soo socda:
Waa maxay ciyaaraha looxa loogu talagalay dadka waaweyn?
Kuwani waa ciyaaraha looxa oo u janjeera inay yeeshaan mawduuc aan ku habboonayn carruurta yaryar, in kasta oo aanay dhammaantood ahayn. Mana aha inay noqoto sababtoo ah waxay leeyihiin waxyaabo ku habboon dadka waaweyn, laakiin sababtoo ah waxaa loogu talagalay dadka waaweyn, sidaas darteed waxay u badan tahay in kuwa yaryar ee guriga ku jira aysan garanaynin sida loo ciyaaro ama loo caajiso.
Maxaad u iibsanaysaa madadaalada noocan ah?
Dhanka kale, mar kasta oo ciyaarta la ciyaaro qoyska ama asxaabta, waqti fiican ayaa la qaataa, qosolkuna waa la damaanad qaadayaa. Sidoo kale, hadda xaaladda masiibada ah waxay noqon kartaa qorshe weyn oo badbaado leh in la joogo. Dhanka kale, waxay sidoo kale kaa caawinayaan inaad si badan u dhex gasho oo aad uga fogaato shaashadda PC ama console-ka ciyaarta, kuwaas oo inta badan ah ciyaaro kor u qaada shaqsinimada iyo go'doominta. Aad bay uga soo horjeedaan ciyaaraha guddiga caadiga ah, kuwaas oo u dhow. Waxaad xitaa u qaadan kartaa hadiyad weyn Christmas-ka, ama taariikh kasta oo kale.
Waxaa jira dukaamo badan oo gaar ah oo lagu gato ciyaaraha looxa, iyo sidoo kale dukaamada alaabta lagu ciyaaro oo ay ku jiraan ciyaaraha noocaan ah ee loogu talagalay dadka waaweyn. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican ayaa ah inaad internetka ka iibsato aaladaha sida Amazon, maadaama aad haysato tiro badan oo ciyaaro ah oo ay aad ugu badan tahay inaadan ka heli doonin dukaamada oo dhan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira qiimo kala duwan oo kala duwan iyo xayeysiisyo marmar ah oo aad ka faa'iideysan karto.
Wadada buuxda ee maqaalka: I sii wakhti firaaqo » General » Ciyaaraha guddiga ugu fiican ee dadka waaweyn
Ciyaaraha guddiga ugu fiican ee qoyska